Emergency Live - magazin nnapụta ụwa
Ndụ Mberede - Ụlọ Ọrụ Nlekọta Ọgwụ, Ụlọ Ọrụ Ọgwụ, Nchebe Ọkụ na Nchekwa Obodo
Ahụike na nchekwa
Enyemaka ego maka Ụlọ Ọrụ Nlekọta Ọdachi Maka Ọrịa Ụmụaka
Emergency Live	 Jul 16, 2019
Ihe Mgbochi Kasị Na-emekarị nke Ndị Na-aza Mmetụta Na Onye Na-enwe Nrụgide nke Ụjọ Na-emetụta?
EMS n'ime ụwa
Ị gafeela oge! Okporo ụzọ na mberede ụgbọ okporo ígwè na-eme njem
Syria: Karịa ndị ọrịa 2,000 mesoro na Ụlọ Ọgwụ Ọhụrụ
Emergency Live	 Jul 9, 2019
Tham Luang Cave: Icheta ọrụ kachasị mma nke 2018
Emergency Live	 Jul 8, 2019 0
Kedu otu esi anwale ihe nchebe nnabata nke ọnwa?
Izu abụọ gara aga, a nwalewo ngwaọrụ ọhụrụ maka ịzọpụta ndị na-emepụta mbara igwe n'okpuru mmiri. Akwukwo ihe omuma nke ESA ...
Nnapụta na Agha: Ọrụ EMS n'oge Oké Nkume nke Israel
South Sudan: Ogbugbu gunshot na-elu n'agbanyeghị nsogbu udo
Uniform Uniform na Europe. Wee na Tụlee Nyocha site na ...
Emergency Live	 Jun 13, 2019
Ngwaọrụ Nyocha: Otu esi echekwa na ...
Kedu Usoro Ngwaọrụ Ị Kwesịrị Ịdị Elu ...
Martina Tesser	 Nwere ike 22, 2019
Na-arụ ọrụ akpụkpọ ụkwụ atụnyere maka ụgbọ oloko ọkachamara na EMS ...
Martina Tesser	 Nwere ike 14, 2019
Notre-Dame de Paris bụ Nchekwa ekele na Fire Brigades na a ...
Nchebe na nnapụta maka Astronauts na Obere Ohere: SAFER
Kedu otu esi enweta oge nza ngwa ngwa? Israel Ngwọta ...
Emergency Live	 Jun 17, 2019
Ntughari ihe maka nlekọta mberede, ihe ngwọta na ...
Emergency Live	 Jun 10, 2019 0
Ụgbọ mmiri Dusseldorf adabere na Rosenbauer ARFF ...
Martina Tesser	 Nwere ike 2, 2019
Nkwekọrịta Ngwaọrụ maka Ọdachi Na-akpata ...
Emergency Live	 Feb 7, 2019
EMS na Nnapụta: Chọpụta na teknụzụ na teknụzụ na ...
Ahụike Arab: 10 dị mkpa ihe ngosi na ịkwesighi ...
Loading ...	Ibu Ibu More Posts	Enweghị ozi ndị ọzọ
Ngwa maka saịtị abụọ pilot nabatara ruo mgbe August 27, 2019 Ụlọ Ọrụ Na-ahụ maka Ahụ Ike na Ọrụ Ụmụaka (HHS) nke Onye Ọrụ Nyere Aka Maka Nkwado na Azịza (ASPR) chọrọ echiche tupu afọ a site na ...
TOP 5 Mberede na Ahụike Njikere Ọrụ Job N'ụwa nile
Ọrụ 5 kachasị mma nke ọnwa a na Mberede Live. Nhọrọ anyị nwere ike inyere gị aka iru ndụ ịchọrọ ka ọ bụrụ onye ọrụ mberede. Ndị ọkachamara EMS, ị na-achọ ọrụ ọhụrụ? Kwa ụbọchị EMS na ...
TOP 5 Nchedo Obodo na Nchebe Nsogbu Job ohere ọhaneze n'ụwa niile
Ọrụ 5 kachasị mma nke izu ụka a na Mberede Live. Nhọrọ anyị nwere ike inyere gị aka iru ndụ ịchọrọ ka ọ bụrụ onye ọrụ mberede. Ndị ọkachamara EMS, ị na-achọ ọrụ ọhụrụ? Kwa ụbọchị EMS na nnapụta ...
Ogwu Mgbochi Ejiri Ọ Bụ Ngwọta Dị Mma Maka Enyem Aka Mbụ?
Emergency Live	 Jun 3, 2019
Eke bụ usoro evolushọn maka inyere ndị mmadụ aka na mpaghara ndị akpọnwụ. Ma, ọ bụ ihe ngwọta ziri ezi nye onye ọ bụla? Anyị na-agbalị ịkọwa mgbe ị nwere ike ịhọrọ ya na mgbe ị chọrọ ihe dị iche. Ihe ngwọta nke gburugburu ...
TOP 5 EMS Ọrụ Job n'ụwa niile - Europe
Martina Tesser	 Nwere ike 28, 2019
Ọrụ 5 kachasị mma nke izu ụka a na Mberede Live. Nhọrọ anyị kwa izu nwere ike inyere gị aka iru ndụ ịchọrọ dị ka onye ọrụ ahụike. Ndị ọkachamara EMS, ị na-achọ ọrụ ọhụrụ? Kwa ụbọchị EMS na nnapụta ...
Red Cross na Red Crescent Week - Mgbe ịhụnanya na nraranye na-eme ka ị nwee Ọganihu
Martina Tesser	 Nwere ike 8, 2019
6th na 12th nke May bụ Red Cross na Red Crescent, nke na-enweta ọbụna karịa mkpa na 2019, ebe nke a bụ narị afọ ncheta nke nzukọ. A na-ewepụta izu iji bikọta ya na World Red Cross na Red Crescent nke ...
E nwekwara ya
Akụkọ kachasị ọhụrụ
Akwụkwọ Ntuziaka maka ụgbọelu ụgbọelu! - Echiche nke 7 nọọsụ ...
Kedu ka ụlọ ọrụ Royal Danish na-eme ka nlekọta ahụike na ...
Helicopter dara na Portugal, anọ gburu n'akụkụ Porto
Dị ka ndụ ndụ?
Emergency Live bụ naanị magazin ndị na-asụ asụsụ dị iche iche raara nye ndị na-etinye aka na nnapụta na mberede. Dị ka ndị dị otú a, ọ bụ ezigbo ihe na-ekwu banyere ọsọ na ọnụahịa maka ụlọ ahịa ahịa iji ruo ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ lekwasịrị anya; dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ niile na-etinye aka n'ụzọ ụfọdụ n'ịkwado ụzọ njem pụrụ iche. Site na ndị na-emepụta ụgbọala na ụlọ ọrụ ndị na-etinye aka n'ụgbọala ahụ, nye ndị na-eweta ihe nchekwa na nnapụta na ihe enyemaka.
Ekwentị: + 39 340 2246247
Dee ya info@emergency-live.com ma ọ bụ gaa na ụdị ozi.
Nọmba VAT: IT02277610347
© 2019 - Ndụ Mberede. Ikike niile echekwabara.